कतिपय अवस्थामा आफूले चाहेर पनि ब्लग लेख्न नसकिने रहेछ-आनन्द पोखरेल - MeroReport
कतिपय अवस्थामा आफूले चाहेर पनि ब्लग लेख्न नसकिने रहेछ-आनन्द पोखरेल
स्थायी घर नवलपरासी भएपनि आनन्द पोखरेल, सूदुरपश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुरमा जन्मिए । साथै उनले माध्यमिक शिक्षा नवलपरासीमा लिएपछि पोखराबाट प्रमाणपत्र तह र भरतपुरबाट स्नातक तहको शिक्षा आर्जन गरे । हाल उनी चितवनको भरतपुरमा बसोबास गर्छन् । 'सानै देखिको लगावका कारण प्रमाणपत्र तहको अध्ययन सुरु गर्दाको अवस्थाबाट नै पत्रकारिता क्षेत्रमा बामे चाल्न सुरु गरेको मान्छे भएकोले यस पेशाबाट टाढिन सकेको छैन।'-आनन्द बताउँछन् । पत्रकारितामा सक्रिय आनन्दले 'समय र परिवेश' अनुसार देशको समसामयिक स्थितिबारे ब्लग लेखनको यात्रालाई पनि अगाडि बढाईरहेका छन् भने उनी सामाजिक संजालहरुमा समेत उत्तिकै सक्रिय छन्। मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै आनन्द पोखरेललाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी:
आनन्द पोखरेललाई अरुले कसरी चिन्ने?
आनन्द पोखरेल भनेको पत्रकारिता क्षेत्रमा बामे सर्ने कोशिस गरेको एउटा साधारण नेपाली युवा अर्थात् पत्रकारिताको विद्यार्थी हो । जसले हालको अवस्थामा चितवनबाट प्रकाशित हुने सञ्चारपत्र दैनिकको समाचार शाखामा काम गरिरहेको छ । साथै म अन्य केहि अनलाईन र विद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुसँग पनि सम्बन्धित छु ।
सोसल मिडियामा धेरैले ट्वीटे भनेर चिन्नुहुन्छ भने मलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्ना शब्दहरु पस्कने ब्लगर/लेखकको रुपमा पनि चिन्नुहुन्छ । म एउटा खुला किताब हुँ, जसले जसरी चिन्नुहुन्छ म त्यसरी नै चिनिन चाहन्छु ।
तपाँइले चलाउने ब्लगहरु कुनकुन हुन् । meroreport.blogspot.com बाहेक अरु पनि छन्?
मैले चलाउने ब्लग भनेको मेरो रिपोर्ट त भैहाल्यो । त्यसपछि meroreport.net चलाउने गरेको छु।
म समसामयिक कुराहरुलाई बढि जोड दिएर ब्लग लेख्ने एउटा ब्लगर हुँ । सकेसम्म जनचासोका कुराहरु राख्न बढि मन पर्छ । किनकी समसामयिक विषयलाई लिएर समाजिक सञ्जालमा बहस पनि भैरहेका हुन्छन् तर खासमा ठेट (चुरो) कुरा आएको हुँदैन । तिनै कुराहरुलाई आफूले बुझेसम्म र सकेसम्म विज्ञहरुको पनि राय राखेर ब्लग लेख्ने गरेको हुन्छु जसले गर्दा सामाजिक सञ्जाल हेर्नेहरुलाई सुसुचित गराउने उद्देश्यले जन सरोकार र समय सान्दर्भिक विषयवस्तुहरु राख्ने गरेको हुन्छु । यसको एउटा उदाहरण हो नेपालमा ब्यापक चर्चामा आएको मोन्सान्टो काण्ड । कहिलेकाँहि कथाले माग गरे अनुसारका साहित्यिक कुराहरु पनि ब्लगमा राख्ने गरेको हुन्छु ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि थाल्नुभयो र कसरी ब्लगिङ सुरु गर्नुभयो?
मैले ब्लग सुरु गरेको त सन् २०११ तिर हो, त्यो बेलामा रमाइलोको लागि ब्लग लेख्ने गरेको थिएँ । त्यसपछि करिव एक वर्ष जति म ब्लग लेखनको क्षेत्रमा निस्कृय नै रहेँ । पछि चितवन पोष्टका काम गर्ने बेलादेखि समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ब्लग लेखनको यात्रा गर्दैछु । आफूले लेखेको ब्लगबाट थोरै मात्रामा भएपनि ब्लगको अध्ययन गर्नेहरुलाई समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिनको लागि ब्लग लेखनलाई निरन्तरता दिएको छु । कहिले काँही मुलधार भन्दा बाहिर रहेर पनि रमाइलोको लागि ब्लग लेख्ने पनि गरेको छु, जुन ज्ञानवर्धक भन्दा पनि नितान्त मनोरञ्जनात्मक हुन्छन् ।
म आत्मसन्तुष्टिको लागि ब्लगिङ गर्ने गर्छु । आफूले लेखेका ब्लगहरु अध्ययन गर्ने ब्यक्तिलाई पनि केहि नयाँ कुराहरु मिल्यो भने त्यो नै मेरो आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । साथै आफूले लेखेको ब्लगले सामाजिक क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन पनि पुर्‍याएको हुन्छ विशेषगरी त्यसको लागि पनि म ब्लग लेख्छु ।
कस्ता बिषयबस्तु तपाईंको ब्लगमा प्राथमिकतामा पर्छ र किन?
समसामयिक विषयवस्तुहरु बढि मेरो ब्लगका विषयवस्तु हुन् । कारण सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक विषयवस्तुमा बहस भएको मैले देख्ने गरेको छु तर त्यसले समाधान निकाल्ने गरेको हुँदैन । मैले केहि हदसम्म भए पनि समाधान सहित ब्लग लेखनलाई प्राथमिकता दिने गरेको छु । सबै भन्दा बढि विषय त सामाजिक विकृती र वेथितिका पक्षहरुलाई ब्लगमा प्राथमिकता दिने गरेको छु ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छनि हैन?
हो, एकदम सही । मैले पनि सुरुमा रहरले नै ब्लग लेखनलाई सुरुआत गरेको थिएँ बीचमा केहि समय ब्लग लेखनलाई स्थगन पनि गरे तर हाल समय निकालेर लेख्ने गरेको छु । कतिपय अवस्थामा आफूले चाहेर पनि ब्लग लेख्न नसकिने रहेछ । देशको अवस्थाका कारण पनि ब्लग लेखनलाई समस्यामा पारेको मेरो सामु तितो उदाहरण बनेको छ । लोडसेडिङका कारण मैले कतिपय समसामयिक विषयवस्तुहरुमा लेखेका ब्लगलाई पूरा गर्न नसकेर अप्रकाशित रुपमा नै राख्न बाध्य भएको छु ।
ब्लगिङ बाहेकाको मेरो रुचिको विषय भनेको पत्रकारिता नै हो । जुन मेरो पेशा पनि हो र यो नै मेरो धर्म पनि हो । पेशालाई मैले भगवानको रुपमा मान्ने गरेको छु, यस बाहेक दैनिक रुपमा केहि समय निकालेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथीहरुसँग रमाइला गफ गर्नु पनि मेरो रुचिको विषय हो ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
नेपालमा सोसल मिडियाको खासै विकास हुन नसकेको मैले पाएको छु । मान्छेहरुले सोसल मिडियालाई मनको कुण्ठा पोख्ने माध्यमको रुपमा बढि प्रयोग गर्न थालेका हुन् कि जस्तो भान पनि पर्ने गरेको छ । अहिले जति पनि मानिसहरुले सोसल मिडियाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् उनीहरुले बैचारिक कुराहरु भन्दा पनि कसै प्रति आक्षेप र आक्रोशका शब्दका झटारोहरु हान्ने गरेका मैले पाएको छु । यो प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण नागरिक मात्र नभएर देशका उच्च राजनीतिज्ञहरु पनि अछुतो रहेका छैनन् ।
अनि नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोगरु ?
नेपाली ब्लगिङको दुरुपयोग भन्दा पनि सदुपयोग नै धेरै भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ । भात खाएको ठाउँमा सिता पोखिन्छ भने झैँ ब्लगिङमा नकारात्मक विषयवस्तुहरु भए पनि त्यो भन्दा बढि सकारात्मक विषयवस्तुहरु रहेका छन् ।
मैले अन्य साथीहरुको ब्लगलाई पनि नियमित रुपमा पढ्ने गरेको छु । केहि साहित्यिक विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तु समेटिएका ब्लगहरु मेरो रोजाईँमा पर्ने गर्दछन् । मैले फुर्सद भएको समयमा हेर्ने ब्लग भनेको www.suryakoblog.blogspot.com, www.shikaruexpression.blogspot.com, bikashkoirala.wordpress.com, sabdakarma.blogspot.com , www.baskune.wordpress.com, www.phucchijamuna.blogspot.com, लगायतका रहेका छन् ।
ब्लगिङ वा ब्लगरको लागि आचारसंहिताको आवश्यकता भयो भने ब्लगिङको क्षेत्रमा फैलिएको विकृतिको नियन्त्रण हुन्थ्यो होला । ब्लग भनेको लेखको स्वतन्त्र विचार हो भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् तर स्वतन्त्र रुपमा लेखिएका ब्लगहरुले सामाजिक सद्भाव विथोल्ने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ त्यस कारण पनि आचारसंहिता भयो भने ब्लगमा गुणस्तरियता आउँछ होला ।
मैले प्रायः हेर्ने भनेको चिनेका साथीहरुको ब्लग हो उनीहरुले आचारसंहिता पालना गरेको जस्तै मानेको छु । उनीहरुले ब्लगमा त्यति साह्रो समाजमा अपाच्य हुने शब्दहरु पनि प्रयोग गरेका हुँदैनन् ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताइदिनोस न !
ब्लग लेखन वा त्यसमा समेटिएका सामाग्रीहरुसँग जोडिएका रमाइला घटनाहरु त धेरै छन् । कुनै बेला चितवनका एसपीको बारेमा लेखेको ब्लगले चितवनमा सनसनी मच्चाएको थियो भने, एकवर्ष अगाडि लेखेको मौलाकालिका हाइकिङ र साउन महिना र हरियो चुराको सन्दर्भमा लेखिएका ब्लगहरुले मिठो प्रसंसा बटुलेको थियो । शिक्षामा भएका राजनीतिकरण र बेथितिलाई समाचार र ब्लगको रुपमा नियमित फलोअप गर्दा चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले फोन गरेर नै धन्यवाद गर्दा प्रशंसा गरेका थिए यो पनि रमाइलो पक्ष हो ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
मेरो विचारमा ब्लग भनेको आफ्ना विचारहरुको थलो हो जस्तो लाग्छ । यहाँ आफूले लेख्न चाहेका विचारहरु एउटै विषयवस्तुमा धेरै शब्दहरुलाई समेटेर लेख्न सकिन्छ । यो निजात्मक निबन्धको भण्डार हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । ट्वीटरमा १ सय ४० शब्दभित्र कुनै विषयवस्तु माथि सटिक टिप्पणी गर्ने गरिन्छ भने फेसबुक भनेको साथीभाइ तथा आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्ने चौतारी हो जस्तो लाग्छ ।
मैले हेर्ने गरेका नेपाली ब्लगहरुमा सामाजिक अहित हुने कुरा भेटाएको छैन, हितका कुरा नसमेटिएको भए पनि अहित हुने विचारहरु नहोउन् त्यहि राम्रो हो ।
ब्लगिङलाई कहिँकतै बैकल्पिक मिडिया अर्थात् आफ्ना कुराहरु आफ्नै तरिकाले अभिब्यक्त गर्ने थलो र तपाँईले भनेझैँ निजात्मक मिडियाका रुपमा पनि लिईएको पाइन्छ तर यो अँझै काठमाण्डौ केन्द्रित मात्र भइरहेको छ र मोफसलमा ब्लगरहरु एकदमै कम छन भन्ने पनि गरिन्छ नि । किन होला?
अन्य छापा तथा विद्युतिय सञ्चार माध्यमले समेट्न नसकेका स्थानीय विषयवस्तुहरुलाई ब्लगको माध्यमबाट नागरिकहरुले जस्ताको तस्तै अभिब्यक्त गर्ने कला ब्लगरमा हुन्छ । नागरिकहरुको विचारलाई मुलधारका सञ्चारमाध्यमले सम्पादन पछि मात्र स्थान दिन्छ भने ब्लगमा लेखक स्वतन्त्र हुन्छ उसले चाहेको विषयवस्तु लेख्न पाउँछ त्यसैले ब्लगलाई वैकल्पिक मिडिया भनिएको हुनसक्छ । काठमाण्डौ देशको राजधानी भएको भएर पनि प्राय: युवाहरु अध्ययन होस् वा रोजगारीको शिलशिलामा त्यहाँ पुगेका हुन्छन् स्वभावैले अन्य सहरको भन्दा त्यहाँको जनसंख्या धेरै भएका कारण पनि त्यहाँ ब्लगर बढि देखिएका हुन् । तर देशका अन्य सहरहरु चितवन, बुटवल, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीमा ब्लगरको संख्या थोरै छ भन्न मिल्दैन । मोफसलमा जनसंख्याको अनुपातमा ब्लगर धेरै नै रहेका छन् ।
ब्लगिङलाई केहीले नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त?
हो, मैले पनि ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिताको सशक्त माध्यमको रुपमा लिने गरेको छु । ब्लगिङ भनेको नागरिक पत्रकारिताको ज्वलन्त उदाहरण नै मान्नुपर्छ । जनताद्वारा जनताको लागि जनताले नै लेखिने विचार वा स्थानीय विषयवस्तुको उठान नै नागरिक पत्रकारिता हो । नागरिक पत्रकारितालाई सिभिक जर्नालिजम र सिभिल जर्नालिजम गरेर वर्गिकरण गर्ने गरिएको छ । हामीले ब्लग मार्फत सिभिल जर्नालिजमको प्राक्टिस गर्दै आएका छौँ । जहाँ समेटिएका विचारहरु नितान्त ब्लगरको ब्यक्तिगत विचार हुन्छ । नागरिक पत्रकारितामा सम्पादक, प्रकाशक सबै ब्लगर नै हुन्छ, उसको आफ्नो विचारमा सम्पादक मण्डलको सेन्सर लाग्ने काम हुँदैन । म पत्रकारिता गर्ने ब्यक्ति कतिपय अवस्थामा पत्रिकामा उल्लेख गर्न नसकिने विषयवस्तुलाई ब्लगिङका माध्यमबाट पाठकहरुको सामु प्रस्तुत गर्ने गरेको छु ।
मेरोरिपोर्टले ब्लगरहरुलाई जुन रुपमा 'ब्लगर अफ दि विक'को रुपमा उभ्याउने गरेको छ, यो एकदमै सह्रानिय विषय हो । यसले नयाँ ब्लगरहरुलाई ब्लग लेख्नको लागि थप हौसला पुर्‍याउँछ र अझै उत्तरदायी बनाउने गरेको छ । मेरोरिपोर्ट समूहले मलाई 'ब्लगर अफ दि विक' बनाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरोरिपोर्ट समूहले मलाई आजैको दिनदेखि ब्लगिङको क्षेत्रमा थप उत्तरदायी बनाएको महसुस गर्दैछु ।